Global Voices teny Malagasy » Shina: Fotoana ho an’ny adihevitra vaovao momba ny fitsabahana amin’ny fiainana manokan’ny olona · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Desambra 2010 16:10 GMT 1	 · Mpanoratra John Kennedy Nandika avylavitra
Sokajy: Amerika Avaratra, Azia Atsinanana, Angletera, Etazonia, Malezia, Rosia, Shina, Singapaoro, Taiwan (ROC), Thailandy, Hevitra, Lalàna, Teknolojia, Zon'olombelona
Raha araka ny Privacy International , i Shina no ery amin'ny tendrony amin'ireny fiarahamonina manao ny fitsikilovana ho tandra vadin-koditra  ireny, arahan'i Malezia, Rosia, UK ary Taiwan, Thailand sy Etazonia. Ao anaty lahatsoratra iray  [zh] ao amin'ny bilaoginy Phoenix, amin'ny maha-olona manam-pahatsiarovana ny fahazazany tsy mba nananany fotoana ho azy manokana mihitsy azy, ilay poeta, Rui Shen, sady mpampianatra ao amin'ny United States Naval Academy dia manontany hoe: amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana toa voatsikilo isa-minitra izao, tsy fotoana ve izao hiresahana momba ny fitsabahana amin'ny fiainana manokana izay manoatra lavitra noho ny sehatra fiarovana seranam-piaramanidina ?
Teo ampijerena vaovao aho tamin'io andro io. Tatitra iray nandeha tao no nilaza fa any amin'ireo fivarotana lehibe any Amerika dia nametrahana camera video handraketana ny mpanjifa tsirairay avy, ny anton'io fanarahamaso io, tsy hoe hisamborana ny mpangalatra eny ambony fitoeran'entana, fa ho an'ny fikarohana manodidina ny fitondrantenan'ny mpividy. Nanazava ny amin'ireo zavatra hita eo amin'ny fàfana ny mpitantana toeram-pivarotana iray: “Jereo ity mpanjifa ity, mijanona manoloana ity fitoeran'entana ity mandritra ny folo minitra izy, mazava ho azy fa mila fanampiana izy. Manampy anay handafo bebe kokoa ny camera video. Handefa olona eny aho izao dieny izao.” Nanontany ny mpanadihady, “Nefa koa ampiasaina amin-javatra hafa ireny video ireny, sa tsy izany?” Nihomehy ilay mpitantana: “Ny amin'izany, mbola resaka hafa indray”
Nanaraka ilay vaovao ny resadresaka nifanaovan'olona vitsivitsy. Na iray aza tamin'izy ireo tsy nisy nankasitraka ny fisian'ny camera video eny rehetra eny, ary efa an-taonany maro no nahatsapany toy izany; kanefa dia mitohy mitombo hatrany ny isan'ny camera video, raha tokony hoe hihena. Tsy manana fiainana manokana intsony isika; rehefa isika ilay manao firaisana ao an-trano iny, mbola afaka mahita antsika ireo zanabolana any an-habakabaka any. Tsy misy hafa amin'ny fony andro faran'ny Kaominisma hoe tsy mahazo manao firaisana ara-nofo ao an-tranonao ianao rehefa mbola tsy manambady vita mariazy, na hoe tsy afaka hiteny manohitra ny Antoko ao an-trano satria manan-tsofina ny rindrina ary mety hisy olona hitoroka antsika any amin'ny komity ifotony eo amin'ny fokontany noho isika nanao firaisana ara-nofo nefa tsy nahazo alalana na noho isika manohitra ny revolisiona.
Miainga amin'ny Huang Shuai  ka hatramin'ny fotoan'andron'ny fitorotorohana tsy amin'antony tamin'ny taona 1970 , dia ny karazana fanarahamaso faobe ankehitriny, izay tokony hampiahiahy antsika amin'izao fotoana.
Tsy misy antony tokony hitorohana na iza na iza intsony amin'izao fotoanan'ny fanarahamaso tsy ankiato izao. Miaraka amin'ireo maso mangatsiakany, mibanjina antsika tsy mitsahatra ireo camera video, izay rehetra fihetsika ataontsika. Baikoan'ireo teknolojia vaovao, miditra amina vanim-potoana iray izay mampiboridana amin'ny fotoana rehetra isika. Tsy noho ny tahotra avy amin'ireny fotoana lehibe ireny, fa na dia amin'ity anio ity aza dia tsy sahy mandeha ao amin'ny Facebook aho ary tsy mihevitra mihitsy ny hanao izany. Vao avy namaky mihitsy aho izao mikasika ny fomba fivarotan'ny Facebook ny tahiriny amin'ireo orinasa vaventy mpanao dokambarotra, na tsy manana zava-miafina eo amin'ny fiainako aza aho, tsy laniko ny hoe ny mombamomba ahy no vidiana na amidy. Io no antony tsy mba ametrahako fanamarihana ao amin'ny Sina na Sohu, tsy mba ananako ireny fitorahana bilaogy kiritika ireny sy tsy dia itsidihako tranonkala maro loatra.
Raha ny marina, fantatro fa ny fanaovako izany dia familiako ny tenako tsy hijery ny zava-misy, satria efa mameno tanàna ny camera video . Tsy ela akory izay ny fampahalalam-baovao Amerikana no niresaka momba ny fiarovana ny seranam-piaramanidina. Maro ny olona no tsy miombon-kevitra amin'ireo fepetra fiarovana ny seranam-piaramanidina izay mampiseho ny toe-batan'ny olona, izay raisin'izy ireo ho toy ny fitsikilovana tanteraka ny maha-izy azy manokana. Rehefa nijery ilay resadresaka tamin'ny vaovao, dia manontany tena aho hoe: olona tsy milamina ve sa mitapy ireny olona ireny?
Raha afaka miditra amin'ny aterineto avy any an-tranonao ianao, na raha efa nividy zavatra tamin'ny alalan'ny tranonkala, dia efa niparitaka sahady izay ny mombamomba anao rehetra. Ka amin'izany dia fiainana manokan'ny olona manao ahoana no mbola eritreretinao fa hanananao? Raha efa nanao fitaràfana (radio) ianao, niahiahy ve ianao fa hoe ho voahosihosy ny fiainana manokanao? Tsy misy idiran'izay endrika ivelan'ny vatanao mihitsy ny fiainanao manokana, na ny endriky ny taovam-pananahanao, inona no tokony hiraharahan'ny olona an'izany? Tsy any no ahitàna marina ny tena fiainanao manokana fa ao anatin'ny solosainao io, eny amin'ny làlana izoranao, ary amin'ny toerana rehetra alehanao.
Ireo tranonkala notsidihanao? Voatahiry ao anaty solosainao ny lisitr'izy ireny ary azon'ny sasany anaovana fanadihadiana eo noho eo ihany. Ary ny momba ny zavatra vidianao any amin'ny toeram-pivarotana? Avadibadika koa ny antontan'isa mikasika ny fahazaranao miantsena. Ary ny olona ifaneraseranao any ivelan'ny trano? Misy camera mijery anareo. Amina vanim-potoana iray hoe ny isa-minitra amin'ny fiainanao dia voatsikilo avokoa, mba inona sisa moa izany no fiainana manokana mijanona ho antsika?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/12/02/11104/
 fiarahamonina manao ny fitsikilovana ho tandra vadin-koditra: http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_surveillance#State_enforced
 lahatsoratra iray: http://blog.ifeng.com/article/8913419.html
 sehatra fiarovana seranam-piaramanidina: http://www.schneier.com/blog/archives/2010/11/me_on_airport_s_1.html
 fotoan'andron'ny fitorotorohana tsy amin'antony tamin'ny taona 1970: http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Revolution